Maxay tahay dhibaatada weriyayaasha Africa? - BBC Somali
Maxay tahay dhibaatada weriyayaasha Africa?
25 Agoosto 2012
Image caption Xubnaha la kumay Madaxweynaha Ghana ayaa ka kala socday ururada suxufiyiinta qaaradda Afrika iyo adduunka
Guddoomiyaha xiriirka guud ee ururrada Suxufiyiinta Afrika, Cumar Faaruuq Cusmaan, oo haatan jooga dalka Ghana ayaa sheegay inay Madaxweynaha dalkaas, John Mahama, ay kala hadleen sidii madaxda ururka Midowga Afrika ay u oggolaan lahaayeen xeer lagu ilaalinayo suxufiyiinta qaaradda Afrika.
Qaaradda Afrika sanad walba ayaa dhibaatooyin kala duwan loogu geystaa suxufiyiinta, oo qaar la dilaa, qaar la xiraa, halka qaar kalena jirdil iyo hanjabaad ay kala kulmaan maamulada ka jira Afrika.
Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha dhibaatada ugu badan ay ka soo gaarto weriyayaasha ka hawl-gala.
Image caption Madaxweyne John Mahama iyo Guddoomiye Cumar Faaruuq
Soomaaliya waxaa sanadkan oo keliya lagu dilay ilaa sideed weriye, iyadoo qaar kalena ay dhaawacyo soo gaareen.
Waxaa jira dalal kale oo Afrika ah sida Eritrea iyo Ethiopia oo ka mid ah meelaha ay ku xiran yihiin weriyayaasha ugu tirada badan qaaradda.
Haddaba waxyaabihii ay kala hadleen Madaxweynaha Ghana, ayaa Cumar Faaruuq oo isla markaana ah Xoghayaha Guud ee ee Ururka Qararanka Suxufiyiinya Soomaaliyeed ee (NUSOJ) uu uga warramay Farxaan Maxamed Jimcaale.